FAQ - Aja mgbapụta, sump mgbapụta, ajịrịja nkume mgbapụta Manufacturer
Dị iche iche nlereanya nwere dị iche iche price .Anyị ga-ahọrọ na-nlereanya dị ka kwa afọ ị na-enye. na mgbe ahụ anyị na-aguputa na-eme ka nkwekọrịta .Ntre mbụ PLS akwadebe kwa.
Ọ dịghị, anyị na-adịghị na kacha nta iji ibu. naanị mgbe ụfọdụ i kwesịrị iburu ibu gị ụgbọ mmiri, otú mbụ PLS ịlele ibu ụgwọ na gị forwarder.
Ee, anyị nwere ike na-emepe emepe otu. The ngwaahịa nwere ike dị ka gị request.you ike izipu m ịbịaru na anyị nwere ike ime ya dị ka kwa.
Ee, anyị nwere ike inye ọtụtụ akwụkwọ tinyere Asambodo nke Analysis / Conformance; Insurance; Mmalite, na ndị ọzọ na mbupụ akwụkwọ ebe required.also ndepụta ịbịaru gafee sectional ịbịaru.
N'ihi na n'omume, na-edu ndú oge bụ banyere 7 ụbọchị. N'ihi na uka mmepụta, na-edu ndú oge bụ 20-30 ụbọchị mgbe na-anata ego ugwo. The ụzọ ụfọdụ, irè mgbe (1) anyị natara gị ego, na (2) anyị nwere ikpeazụ unu ihu ọma gị ngwaahịa. Ọ bụrụ na anyị ụzọ ụfọdụ na-adịghị arụ ọrụ na gị n'obi imecha, biko gaa n'elu gị chọrọ na gị ire ere. N'ọnọdụ nile anyị ga-agbalị nabata gị mkpa. Ọtụtụ mgbe anyị na-enwe ike ime so.we nwere otutu akụkụ ahụ mapụtara na ngwaahịa, otú nnyefe oge mgbe ụfọdụ bụ ike.
50% ego tupu, 50% itule megide ndeputa B / L. anyị na-ahọrọ ndị TT ugwo okwu .Ọzọkwa L / C bụ ok.
maka akụkụ ụfọdụ, anyị na-enye akwụkwọ ikike n'ime otu afọ, ma n'ihi wetted akụkụ, na-emekarị ọ ga-abụ 3-6months ahụ .Nke na-adabere na dị iche iche na-arụ ọrụ ọnọdụ
Ee, anyị na-eji elu àgwà mbupụ packaging.we e exporting a fọrọ nke nta ka afọ 16, otú ahụ, echegbula banyere ngwugwu.